Nchịkọta data na-agafe agafe bụ nchịkọta nke data ndị na-azụ ahịa site na omume ha na mmekọrịta ha na-enweghị ịgwa ma ọ bụ ịrịọ ikike ndị ahịa. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa amaghịdị etu esi jide data, ma ọ bụ otu esi eji ma ọ bụ kesara ya.
Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nnata kwuru na ụzọ kachasị mkpa ha maka ịnakọta data afọ abụọ site ugbu a ga-abụ nchịkọta data na-agbanyeghị na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ anaghị eme taa. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụlọ ọrụ nyocha ahịa anaghị atụ anya na ha ga-eme nchịkọta data na afọ abụọ.
Ka ndị ahịa wee kwụsị ịkwụsị ma malite ịkesa mkpa, ọbụlagodi ịrịọ, na-enye ndị na-azụ ahịa, ndị ahịa ga-ejide data. Ihe data agha aghaghi ibu nke oma ma di n’otu oge. A na-enye ezi omume site na ịkwado data sitere n'ọtụtụ ebe. Ezigbo oge agaghị eme site na nyocha ma ọ bụ ndị ọzọ - has ọ ga-eme n'otu oge na omume ndị ahịa.
Fearjọ m bụ na, na-enweghị nchịkọta data na-enweghị isi, mgbidi na-amalite ịrịgo. Ulo oru a achoghi iwepu ọdịnaya, ngwa oru na ngwa n’efu iji kwalite ahụmịhe ndị ahịa n’ihi na ha enweghị ike ịchịkọta data ọ bụla nwere ike isi na ya. Ànyị chọrọ n'ezie ịga ebe ahụ? Amaghị m na anyị na-eme… mana enweghị m ike ịta ụta maka mmegide ahụ.